Iifonti zasimahla ze-Retro zoMgangatho oPhezulu ezi-10 kufuneka wazi uEwe okanye uEwe | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Kuyilo lomdlalo wevidiyo ngamanye amaxesha sizifumana sijongana nokukhangelwa kwemithombo rhoxisa ngamanye amaxesha. Ke ukuba neendidi ezahlukeneyo zazo esinokuphuma ngazo enkathazweni ngaloo mizuzu kubaluleke kakhulu.
Ezi fonti ze-retro ziyakwazi ukukuhambisa ngamanye amaxesha, iimuvi kunye neemvakalelo, ke nayiphi na kuzo kufanelekile ukuba ibe Uhlobo lwakho oluthandayo lwe-retro Ukubonisa ngalo elo xesha kufuneka ubonise kuwo nawuphi na umsebenzi.
2 Yitsho inqatha
5 I-Lazer 84
8 UBetty noir
Uhlobo kunye nobuhle zidityaniswe kakuhle kule fonti yasimahla eyilwe nguMatias Guggisberg, uDick Tracy nabani na?
Umthombo we ubukhulu obukhulu yenzelwe nguTimo Titzmann ogqibeleleyo ekwenzeni iipowusta ngohlobo lwe-retro kunye nedisco.
Njengokuba sasithandana umzuzwana ngokuwa kunye nochukumiso lweediliya olunalo, iPortico yifonti eyilwe nguMehmet Reha Tugcu. Kuquka inguqulelo yasezidolophini.
Ifonti yesimbo esi-italic ephefumlelwe lolo shicilelo kwintengiso iingqayi zejam ezisizisa kwezinye iindawo kunye nobubanzi. Ngamandla amakhulu, iHamster yenye yefonti yasimahla ebalaseleyo.
La ifonti yamashumi asibhozo Ukugqwesa ngokubalaseleyo kunento yokuthinta i-neon kunye ne-retro efana naleyo yeshumi.
Ifonti eyahlukileyo eyenziwe nguLucas Almeida kunye noDmitry Goloub. A Uyilo lweediliya ogqwesileyo kwaye ugcwele ubuntu.
Iphefumlelwe ubuchwephesha bezobugcisa ukusisa kwenye ifonti ye icon kula mashumi eminyaka adlulileyo. Ngokuqinisekileyo kuya kukukhumbuza ngokuchwetheza kwezinye zeqweqwe lamaqela adumileyo.
Yenzelwe iBlambot, inkampani ezinikele kwiifonti ezihlekisayo. Iqela linike uBetty Noir mahala kwiiprojekthi zabalinganiswa. A eyona intle kolu luhlu.
Umgangatho ophezulu we-retro font eyilwe nguTyler Galpin. Iphefumlelwe iiposta zepaki Amazwe aseMelika.
Enye ifonti entle esisa kwi Ngama-20 ngqo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Iifonti ezili-10 zasimahla zeRetro ekufuneka uyazi ewe okanye ewe
Imithombo enexabiso .. inomdla.
UWacom uzimisele malunga neetafile zoyilo ngeMobileStudio Pro
IMaya 2017 ibeka isandi 'kwimizobo eshukumayo'